अब पल शाहको करिअर कता ? − Kalakarita
आइतबार, जेठ ३०, २०७८, १० : ३९
Entertainment News Portal from Nepal – Cinema, Literature, Feature News, Multimedia News, Music, Drama, Culture, Bollywood, Hollywood, Gossip, Photos and Videos
अब पल शाहको करिअर कता ?
मंगलबार, जेठ ७, २०७६, १२ : ५८ कलाकारिता
काठमाडौं – केही वर्षदेखि अभिनेता पल शाहलाई ठूलो स्टारडम भएका कलाकारका रुपमा हेरियो । म्युजिक भिडियोमा पनि उनको उत्तिकै क्रेज देखियो, जुन क्रेज अहिले पनि छ । तर, फिल्ममा भने पलले कुनै कमाल गर्न सकेनन् ।
हालै पल अभिनित फिल्म ‘वीर विक्रम २’ रिलिज भएको छ । ‘जोनी जेन्टलम्यान’ फ्लप भएपछि उनले केही समय ग्याप लिएर चलचित्र ‘शत्रु गते’ मा अभिनय गरेका थिए । यो फिल्ममा पलको अभिनयको राम्रै चर्चा भयो । तर, फिल्म पलका कारणले भन्दा पनि अरु हास्य कलाकार भएका कारण चलेको भनियो । जसकारण पल शाहले यो फिल्मबाट क्रेडिट लिन पाएनन् ।
यतिबेला हलमा रिलिज भएको फिल्म ‘वीर विक्रम २’ पलकै कारणले चल्नुपर्ने हो तर यो फिल्मलाई पनि दर्शकले पत्याएनन् । पलले दर्शकमाझ आफ्नो क्रेज देखाउन सकेनन् । त्यसो त फिल्मको कथा नै राम्रो नभएपछि कलाकार तथा निर्देशकले ले के नै गर्न सक्छ र ?
पलले मिलन चाम्सको ब्यानरलाई राम्रो ब्यानर भन्दै छानेका थिए । तर, फिल्म व्यावसायिक हिसाबले मात्र होइन, समीक्षकका हिसाबले पनि पूर्ण असफल रह्यो । यो फिल्मले पल शाहको वृत्ति (करिअर) मा असर पारेको धेरैले आँकलन गरेका छन् । असर त पार्ला या नपार्ला तर फाइदा भने खासै दिएन फिल्मले ।
त्यसो त अर्को फिल्म रिलिज हुँदा पुनः पलको कमाल देखिन सक्ने सम्भावना त यथावत् छ । तर उनले अभिनयमा भने कुनै सुधार नगर्दा पललाई थप चुनौती थपिएको छ । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने र कस्ता फिल्ममा काम गर्नेमा पलले विचार पुर्‍याउन दर्शकले अनुरोध गर्न थालेका छन् ।
यसमा तपाईंको विचार रद्द गर्नुहोस्
नोट : तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन र गोप्य राखिनेछ ।
दर्शकले ‘जात्रै जात्रा’ मन पराउनुका ४ कारण
काठमाडौं – नेपाली चलचित्रले दर्शक पाउन छोडेको धेरै भइसकेको छ । वर्षमा सयभन्दा बढी फिल्म त बन्छन् । तर, ती...
काठमाडौं – केही वर्षदेखि अभिनेता पल शाहलाई ठूलो स्टारडम भएका कलाकारका रुपमा हेरियो । म्युजिक भिडियोमा पनि उनको उत्तिकै क्रेज...
समीक्षकलाई दीपकराज गिरीको झटारो – तरण आदर्शजस्ता समीक्षक भएनन्
काठमाडौं – नेपालमा फिल्म राम्रा बन्दैनन् । जसकारण फिल्मको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आउने गर्दैन । समीक्षाका आफ्नै समस्या होलान् तर...
सत्यम शिवम सुन्दरम सम्पादनको अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, चैत २६– बिजि बर्मा फिल्मसको ब्यानरमा कला राई को प्रस्तुती र शंकर अधिकारी घायलको लेखन तथानिर्देशनमा निर्माण भएको नेपाली कथानक...
जब चरा अम्बा खान आयो, ‘प्रसाद’ जन्मियो
काठमाडौं, २४ मंसिर – एक दिन सुशीलले आफ्ना स्कूले साथीहरुसँग बसेर अम्बा खाँदै थिए । त्यही बेला एउटा चरा आयो...
अकिंत र साम्राज्ञीको ‘रातो टीका निधारमा’ फ्लोरमा
काठमाडौं – दशैँमा प्रदर्शन हुने गरी निर्माण भइरहेको फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ फ्लोरमा उक्लेको छ । शूटिङ स्थलबाट कलाकारले रातो...
युट्युबमा आयो निश्चलको ‘दुई रुपैयाँ’ (फिल्मसहित)
काठमाडौं – सिनेमा घरमा व्यावसायिक रुपमा सफल बनेको चलचित्र ‘दुई रुपैयाँ’ अन्ततः युट्युबमा रिलिज गरिएको छ । यो फिल्मले समीक्षात्मक...
यो मितिमा आउने भयो ‘न यता न उता’
काठमाडौं – गतवर्ष नै रिलिज गरिने भनिएको फिल्म‘न यता न उता’को रिलिज प्राविधिक कारणले पोस्टपोण्ड भएको थियो । माघ २५...
काजलका यी ‘हट’ तस्वीरले फ्यान भए मदहोश !
दक्षिण भारतीय फिल्मकी चर्चित नायिका काजल अग्रवाल यतिबेला बलिउडमा सक्रिय छिन् । मगधीराबाट चर्चित बनेकी काजल ‘सिंघम’ मा उनी अजय...
टाइगर श्राफका कारण दिशाले छोडिन् ‘मर्डर ४’ ?
मुम्बई – बलिउडकी क्युट गर्ल दिशा पटानी पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । उनी अभिनित फिल्म ‘भारत’ रिलिजको क्रममा छ ।...
लेखक बन्न चाहनेका लागि बुद्धिसागरको यस्तो सुझाव
अध्यक्षमा खड्का भर्सेज लामिछाने, कोषाध्यक्षमा कटुवाल निर्विरोध (उमेदवारी सुचीसहित)
रवि ओडको गीतमा पुष्प र आँचलले मर्काए कम्मर (भिडियो)
प्रकाश सपूतले अर्को मन छुने गीत (भिाडियो)
सन्ध्या जोशीको ‘तरकारी’मा सारा सिर्पाली
Nepali Unicode Converter ।। नेपाली युनिकोड
© २०२१ कलाकारिता, सबै अधिकार सुरक्षितmade with by Mohan Khadka